Mampisaraka ny varimbazaha amin'ny akofa - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03 > Misara-bary amin'ny akofa
Ny akofa dia akorandriaka eo ivelan'ny salohim-bary, izay tsy maintsy misaraka, mba ho ampiasaina ny varimbazaha. Matetika dia heverina ho fako vokatra. Nohazaina ny vary hanesorana ny hoditry. Tamin'ny andro talohan'ny fanenonan-tena, dia tafasaraka ny tsaram-bary sy ny akofa tamin'ny alàlan'ny fanipazana azy ireo haingana amin'ny rivotra mandra-pivoahan'ny rivotra ny akofa.
Ny akofa dia ampiasaina koa amin'ny fampifandraisana ireo zavatra tsy misy ilana azy ary tokony esorina. Mampitandrina ny Testamenta Taloha amin'ny fampitahana ny tsy mino an'Andriamanitra sy ny akofa ka atsofoka. "Fa ny ratsy fanahy tsy mba toy izany, fa toy ny akofa entin'ny rivotra" (Salamo 1,4).
«Izaho manao batisa anao anaty rano mankany amin'ny bisy; fa avy aoriako (Jesosy) matanjaka noho izaho ary tsy mendrika hitafy ny kirarony; Izy no hanao batisa anao amin'ny Fanahy Masina sy amin'ny afo. Izy no eny am-pelatanany eny an-tanany ary hampisaraka ny varimbazaha amin ny akofa ary hanangona ny variny ao an-tsompitra; fa ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy azo ihodivirana » (Matio 3,11: 12).
I Jaona Mpanao Batisa dia manamafy fa i Jesoa no mpitsara izay manana fahefana hanavaka ny vary avy amin'ny akofa. Hisy fotoam-pitsarana raha mijoro eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny olona. Napetrany ao an-domparany ny tsara, ny ratsy hodorana toy ny akofa.
Mampatahotra anao ve io fanambarana io sa fanamaivanana azy? Tamin'ny fotoana niainan'i Jesosy teto an-tany, izay rehetra nandà an'i Jesosy dia raisina ho akofa. Amin'ny fotoan'ny fitsarana, dia hisy olona misafidy ny tsy hanaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy azy.
Raha mijery azy manomboka amin'ny fomba fijerin'ny kristiana isika dia azo antoka fa hahafaly an'io fanambarana io. Nahazo fahasoavana tao amin'i Jesosy isika. Aminy, isika dia zanak'Andriamanitra natsangana ary tsy matahotra ny holavina. Tsy tia andriamanitra intsony isika satria miseho eo amin'i Kristy eo alohan'ny Raintsika ary diovina amin'ny fahotantsika. Ny fanahy dia manala antsika ny akofa, ny hoditr'ireo fomba fisainantsika sy fihetsika taloha. Namboarina novolavolainay indray isika izao. Na izany aza, eto amin'ity fiainana ity dia tsy hanana fahalalahana tanteraka avy amin'ny "toetrantsika". Rehefa mijoro eo anatrehan'ny Mpamonjintsika isika dia fotoana tsy ijerena ny zava-drehetra ao anatin'ny tenantsika izay manohitra an'Andriamanitra. Hamarana ny asa natombony tamintsika tsirairay Andriamanitra. Mijoro tsara eo anoloan'ny seza fiandrianany isika. Efa tafiditra ao anatin'ny varimbazaha ao an-tsompiny ianao!